काठमाडौं । तपाई हप्तामा कतिपटक यौन सम्भोग गर्नुहुन्छ ? हरेक दिन ? दुई दिन बिराएर वा हप्तामा एक पटक ? तपाईंको जवाफले तपाईको स्वास्थ्यबारे एउटा अड्कल काट्न सकिन्छ । अमेरिकन कार्डियोलोजी जर्नलका अनुसार जो मानिस हप्तामा दुईपटक यौन सम्पर्क गर्दछ, उसलाई मुटुसम्बन्धी रोगको खतरा कम हुन्छ । यसले मुटुसम्बन्धी रोगबाट बचाउन पनि भूमिका खेल्दछ । यसकारण मानिसहरु यौन जीवनमा क्रियाशील हुनुपर्दछ ।
कामोत्तेजनाको क्रममा अक्सटोसिन हर्मोनका उत्पादन हुन्छ । यसले सिधै रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसकारण यौन सम्पर्कले मुटुसम्बन्धी रोगलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । जब मानिस तनावमा हुन्छ, यसले रक्तचापलाई अनियन्त्रित बनाउँछ र मुटुसम्बन्धी रोग बढ्ने खतरा हुन्छ ।
यौन सम्पर्कले तौल घटाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसबाट राम्रो निद्रा पनि पर्दछ । यसकारण सम्भोगले मानिसको मुटुलाई बलियो बनाउँछ ।
जैबिक मनोविज्ञानको शोधले मानिसले नियमित सम्भोग गर्यो भने उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर कम हुन्छ । यसबाट मुटुको रोगको खतरा कम हुन्छ । यसकारण हप्तामा दुईपटक सेक्स गर्नाले केवल तपाईंको हृदय स्वस्थ रहँदैन यसले त स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै फाइदा हुन्छन् ।